Indawo yokuhlala yeCondominium ejonge ngaselwandle
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguEliane
Indawo entle etofotofo ukuze ukonwabele nosapho.
I-Apartment inamagumbi okulala ama-2 aneebhedi, kunye negumbi lokulala elincinci elinegumbi lokuhlambela elincinci kunye noomatrasi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elikhulu, ikhitshi elixhotyiswe, elifakwe kwi-Wi-Fi, iindawo zokupaka ezi-2.
Ichibi kunye nembono yolwandle
Indawo yokuhlala ine: indawo yokubaleka, igumbi lemidlalo, indawo yokutyela, amadama okuqubha ama-3 amakhulu
18 iikhiyokhi ezinezoso
Inkundla, ukuphuma ngasese elwandle.
Ukufikelela ngezinyuko. UNyaka oMtsha ubuncinci ubusuku obu-2
Nceda uqaphele ukuba indlu ibekwe elunxwemeni e-Icarai - eCaucaia, malunga neekhilomitha ezingama-25 ukusuka kulwandle lwaseFortaleza. Uluntu olugayiweyo olunokuphuma ngasese ukuya elwandle. Jonga itheyibhile yamaza.
Indawo yokutyela ngaphakathi kwikhondom enezidlo ezimnandi ezisuka kwi-R13.00. Banikezela ngesidlo sakusasa kwaye bazise kwindawo yokuhlala.
Amadama okuqubha kunye nedesika yeebarbecues zosapho.
Iindawo zokutyela, iimarike kunye neekhemesti ezikufutshane.
Iinkonzo zokuhanjiswa kwe-iwood okanye iimarike ezikufutshane.
Le ndlu inekhamera yokhuseleko e-1 kwigumbi, ngokwemigangatho efunwa ngu-Airbnb engarekhodiyo. Yenzelwe ukujonga okanye ukujonga esweni kuphela.
Ifumaneka kwiyunithi ye-3fans, kunye nelinen yebhedi.
Ugcino loNyaka oMtsha ubuncinane ubusuku obu-2.
Siyakucela ngobubele ukuba usinike indawo yokuhlala phantsi kweemeko ezifunyenweyo.
Ukulungelelaniswa, kunye nokususa inkunkuma, ukuyishiya kwindawo efanelekileyo kwi-condominium.
Indawo yekhondomu ikwi 7km ukusuka kulwandle lwaseCumbuco. Kwaye i-25km ukusuka kumda weFortaleza Ngesakhiwo esihle kakhulu sezindlu zaselwandle. Kwaye ebusuku iziko elinomtsalane nelidlamkileyo le-gastronomic. I-condominium inendawo yokutyela yangaphakathi ebonelela ngesidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini (izidlo eziqala kwi-R$ 13.00) Ichibi eligqwesileyo kunye nesakhiwo sebarbecue. Ukufikelela kwabucala elwandle. Jonga itheyibhile yamaza
Iinketho kwiimarike zepizzeria kunye neeresityu kunye neekhemesti ezikufutshane nefulethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Eliane
Ndihlala ndifumaneka nge-app.